Nezvedu: APLUS Global Ecommerce
Chikwata chevanyanzvi vane hunyanzvi vane musika-hwakakodzera hunyanzvi hunoita moyo nemweya we Aplus Global Ecommerce. Isu tinotenda mukugadzira iyo inobudirira e-Commerce nharaunda, kushanda zuva-mukati, uye zuva-kunze kuti upe akanakisa masevhisi kune vatengi. Tiri kupa akanakisa Amazon Vatengesi Akaunti Reinstatement Services.
Iyo kambani inofungidzira nharaunda ine bhizinesi ine hutano, makwikwi emakwikwi, uye nyika inogara ichingobudirira, A Plus Global e-commerce ndeimwe yenzvimbo dzayo dzerudzi apo mabhizimusi epamhepo anobatsirwa kufamba mushe. Isu tinopa 360 ° masevhisi kumakambani e-Commerce. Kubva pakubatsira e-Commerce mabhizinesi ane akagwinya mutengesi account kuti uwane amazon vatengesi account kudzoreredzwa, isu tine mhinduro kune vese. Chinangwa ndechekungobatsira chete mabhizinesi kubudirira mumisika senge Amazon asi zvakare kugadzira yavo niche munyika ye e-commerce. Isu tinoedza kuunza iwo mabhizinesi parutivi pamwe nekukurumidza-kuwedzera nzira dzenyika yeE-Commerce uye kuongorora zvakanyanya nekuwedzera. Masevhisi edu ndiwo akanakisa pamusika achigadzira A Plus Global bhizinesi rakavimbika. Tine timu yevanhu vakasarudzwa nemaoko vanobva kwakasiyana mamiriro uye vane hunyanzvi hwehunyanzvi hunodiwa zvakanyanya mumusika. Kuvimbika kwavo uye kuzvipira kunowedzera kukosha kumasevhisi, uye ndiyo USP yeA Plus Global e-Commerce. Yedu 24 maawa akavimbiswa masevhisi ekudzoreredza Amazon Mutengesi maakaunzi anozivikanwa. Iwo ekutengesa-kuwedzera uye account account hutano kutarisa masevhisi akakodzera kuyedza. Kufukidza akasiyana siyana masevhisi, isu tinoshanda newe mumativi mana akafara.
Amazon Appeal Service - tinobatsira kuti iwe utengese zvekare mukati maawa makumi maviri nemana
Mutengesi account yehutano - isu tinochengeta account yako hutano mukati memiganhu nehunyanzvi hwedu
Bhizinesi uye rutsigiro rwekutengesa - isu tinokubatsira iwe kukura, kwete chete kutsigira
Webhusaiti uye App kusimudzira- isu tinokupa yako wega chikuva kuti uite
Isu tinopa zvakagadziriswa masevhisi uye mapakeji akakodzera zvakanyanya kune zvaunoda, zvakabatanidzwa nematanho edomain echirongwa. Kuchengetera nzvimbo yevatengi yakapararira pasirese, A Plus Global inopa masevhisi anodikanwa senge "Amazon Sellers Akaunti Kudzoserwa" inodikanwa neakaundi account yako kuburikidza nekuzvipira, hunyanzvi, uye kugona kwechikwata chedu.